Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan – Page 3 – Wajilad Islamic blog site
Waa kuma Mahdigu?
Waa kuma Mahdigu? Waa maxay Macnaha Mahdigu? Macnaha Mahdigu waa ruux Alle ku hanuuniyey jidka toosan, waxaana rumaysan imaanshihiisa Sunniga iyo Shiicadaba, hase ahaatee mahdiga Shiicadu ay sugayaan waa mid gabi ahaanba ka duwan ka kusoo arooray axaadiista saxiixa ah. Sida caadiga ahna marka Rasuulka Alle (scw) ka warramao arrin qayb oo mustaqbalka dhacaysa waxa... Continue Reading →
Bismilaah Dersigani waa kii labaad ee aan kaga hadalno Jarxiga iyo Tacdiilka. Si aad u fahantid dersigan waxaa fiican inaad soo akhrisid Qeybtiisa 1aad inshaAllah. Dersigan waxaanu kaga hadli doonaa , qofkan wax jarxinaya ama tacdiilinaya sifa nooce ah ayaa laga rabaa.. Sidoo kale maxay tahay alfaada/erayada/odhaahda ay isticmaalaan cuimada loo yaqaan “culamaa’ul jarx wa... Continue Reading →
Waxaan Maanta tooshka ku ifinaynaa in sha Allaah caalim jaliila oo ka mida culamdeenii salafka kuwoodii ugu cadcadaa waa Muxadithki Andalus iyo faqiiheedii ee ahaa Ibnu Cabdul barr. Imaamkani waxuu ahaa baddi cilmiga sidoo kalena aqoonyahankii cilmiga xadiithka iyo Rijaashisa. Waxaa inta u dheeraa aqoonta Cilmul qiraa’aatka iyo weliba Fiqhiga iyo khilaafaadka mass’aaisha fiqiga. Magaciisa... Continue Reading →
Al Jarx Wa tacdiil Bismillah Xadiiska Nabiga sallalaahu caleyhi wa sallam inuu noqdo mid ka sugan isaga iyo inkale ayay ahaayeen culimadu kuwa ku shaqlan. Xadiiska lama eegi jirin matni-giisa ilaa laga eego isnaadka (ragga werinaya). Culimadu waxay u sameeyeen shuruud iyo darbi aan marnaba la dhaafi karin. Dadaalkaas oo dhanna waxay u galeen uun... Continue Reading →
Aadaabul Muxadith Bismillah Aaadaabta laga doonayo qofka Sheegaya Xadiiska Nabiga scw ee ama dadka baraya Sidaan ognahayba in lagu mashquulo oo laga shaqeeyo axaadiista Nabiga scw waxay kamid tahay camalada kuwan ugu fadhliga badan ee Ilaahayna swt loogu dhawaan karo. Sidaa daraadeed qofkan doonaya inuu sii fidiyo axadiista oo uu dadka gaadhsiiyo waxaa laga doonayaa... Continue Reading →
Bismillah, walaalayaal waxa weerar kusoo qaaday umada soomaaliyeed iyo guud ahaanba islaamkaba dadka faafiya diinta Masiixiyada, waxa kusoo qulquaya dalka soomaaliya iyo guud ahaan qaarada Afrikaba dad aad u tiro badan oo doonaya inay gaalaysiiyaan dadka muslimiinta. Dabcan Masiixiyiintu waxay ku guulaysteen inay qaarada Afrika kadhigaan qaarad kiristaan ah, ayadoo aynu ognahay bilowgii qarnigii labaatanaad... Continue Reading →
Siyaabo fudud oo aat ku xifdin kartid quranka
Ikhlaas (camalka oo aad u gaar yeesho Ilaahay): Waxa waajib ah inaad ikhlaad ula timaado Ilaahay, kana dhigto barashada Quraanka Kariimka ah mid aad Ilaahay wajigiisa wax kaga rabto, kuna rajaynaysa inaad ku gaadho raali ahaansho xaga Ilaahay iyo Jannooyinkiisa. Wuxuu Allah dhahay: ( فاعبد الله مخلصا له الدين) (Ilaahay caabud adigoo u gaaryeelaya diinta). Sidoo kale xadiis... Continue Reading →
Tariikhda Imaam Tirmidi ilahay ha unaxariste
New Taariikhdii Imaam Tirmidi Bismillaah! Magaciisa iyo Nasabkiisa Abuu Ciise Maxamed bin Ciisa bin Sowrah bin Muuse bin Dhaxaak Asulami Atirmidi. Wuxuu dhashay casrigii dahabiga ahaa qarnigii sadexaad ee hijriga waa xiligii inta badan la qoray sunada Rasuulka (sallalaahu calayhi wasallam). Sidoo kale waa xiligii ay soo shaac baxday qorista kutubta loo yaqaano (كتب الصحاح )Kutubtaasoo... Continue Reading →
Taariikh nolaleedkii Imaam Nisaa’i
Taariikh nolaleedkii Imaam Nisaa’i Abtirkiisa iyo Barbaarintisii Magaciisa dhamaystiran waa Abuu C/Raxmaan Axmad Ibnu Shuceyb Ibni Cali Ibni Sanaan Ibni Baxar ee Reer Khurasaan kana sii ahaa Rer Nisaa’i . Sanaan waa Balad ka tirsan Dhulka loo yaqaan Khurasaan oo hadda kamid ah wadanka loo yaqaan Iraan. Imaamu Nisaai waxaa la dhalay Taariikhdu markii ay aheyd 215 Hijriyada... Continue Reading →
Tarikhda imam muslim oo kooban
Magaciisa & Nasabkiisa Abul Xusayn Muslim ibnu Al-xajjaaj Al-qushayri Al-nisaabuuri , waxuu ku dhashay magaalada Nisaabuur, oo ku taal waqooyiga bari ee dalka Iran. Aabihii waa Xajjaaj Bin Muslim Al-Qushayri, waxuu ku barbaaray guri cilmi iyo taqwo u saaxiib ah. Waxuu barashada cilmiga bilaabay isagoo yar, maadaama aabihii ahaa nin cilmi lehna waxay taasi u... Continue Reading →
Tarikhda imam Imaam Bukhaari ilahay ha unaxariiste
Magaciisa iyo Meeshuu ku Dhashay. Abuu Cabdullahi Muxammed ibn Ismacil ibnu Ibraahiim ibnu Muqhiira ibnu Bardizba Al Jacfi Al bukhaari. Aabihii Ismaaciil ibnu Ibraahim sida uu Ibnu Xibaan ku qoray Kitaabkiisa ”A-Thiqaat”, waxuu yidhi ”Bukhaari aabihii waxuu axaadiista ka weriyaa Xamaad ibn Zeyd iyo Imaam maalik, isagana Ciraaqiyiin ayaa kasii weriya.” Waxuu ku dhashay meesha... Continue Reading →
HADAANAN SOOMANAYNIN MAXAA ILA GUDBOON?
Gabadha Muslimada ah wuxuu Alle ku qoray dusheeda in bishiiba mar ay u dhaafto cibaadooyinkey la iman jirtay cudur daar sharci ah dartii Waana inay ku raali noqotaa waayo maaha waxaad adigu gacanta ku haysid ood badali karto, sidoo kale maaha wax kaa reebaya guud ahaan acmaashii saalixa ahayd ee aad la imaan jirtay waa... Continue Reading →
Taarikhda Imaam Abuu Daa’wuud ilahay ha unaxariste
Taariikh nololeedkii Imaam Abuu Daa’wuud (Raximahullah) Nasabkiisa & Dhalashadiisa Magaciisu waa Abuu Daa’wuud bin Suleymaan Bin Al ashcath Asssajistaani . Waxuu kamid yahay ragii xadiithka xifidsanaa Imaamku waxuu ku dhashay magaalada Sajistaan ,sanadku markuu ahaa 202 Hijriyada. Barashadiisii cilmiga Abuu Daa’wuud Waxuu ku soo koray isagoo cilmigu uu yahay hamigiisa. Sidoo kale waxuu aad... Continue Reading →
Tarikhda imam Ibnu Maajah ilahay haka rali ahade
Magaciisa iyo Dhalashadiisa Imaamka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Abuu Cabdullaahi Maxamed Ibnu Yaziid al-Qazwiini . Wuxuu ku dhashay magaalada Qazwiin oo ku dhaw magaaladii loo yaqaaanay Rayy oo hada layidhaa(Tehran) ee dalka Iran. Imaamku wuxuu dhashay 20kii Ramadan 209Hijriyada. Cilmi raadiskiisii Imaamku wuxuu barashadiisa cilmiga bilaabay isagoo aad u yar, wuxuuna aad u laazimay oo uu la... Continue Reading →
MAXAAN U CUSBOONAYSIINAYNAA TOWBADA RAMADAANKA KA HOR?
Hadaan su,aashaa jawaabteeda eegno waxaa weeye maxaa yeelay asall ahaanba Muminku mar walba iyo goor walba waa mid towbada Rabigiis jadiidiya kuna dadaala isagoo ku dayanaya Suubahana salawaatu laahi calayhi wasalam, wuxuu ahaa mid maalintii 100 jeer ka badan Rabigii danbi dhaaf waydiista, Ramadanka ka horna Towbadu muhiimad dheeriya ayay leedahay maxaa yeelay towbadu... Continue Reading →
Hadii Aadan Ku Faraxsaneyn Noloshada matukatid ama lagama aqbalo salada
Hadaad isku aragto in aadan ku faraxsnayn noloshaada oo haysanin nolol raaxo leh ogow salaada ma tukatid,ama lama aqbalin salaada aad tukato,sababtoo ah waxaa jira dadka tukada salaada waa laba nooc: 1- nooc marka ay tukanayaan ku raaxeysta salaadooda,oo iyaga oo wali raba in ay sii tukadaan salaadu ay dhamaato,(kuwaas salaadooda waa la aqbalay). 2-... Continue Reading →
QISADII DUL-QARNAYN akhriso ama dhageyso
Qisadan waxay ku bilaabmaysaa su’aal ay gaaladii Reer Qureesheed ay waydiiyeen Rasuulka (N.N.K.H), kooxdaas oo la tashatay yahuuda si ay u jaribaan Nabi Muhamed(N.N.K.H), waxayna waydiiyeen sadex waydiimood, Qisadii Asxaabul-Kahf, Ruuxda iyo Qisadii Dul-Qarnayn. Waydiintaa ay gaaladu ku jarribayeen Nabiga ayaa Xaqu (S.W.T) soo dajiyey suurada Kahfi asagoo kawaramay sadexda qisaba. “Waxay ku warsan Dul-qarnayn xaggiisa, waxaad dhahdaa waxaan idinku akhrin... Continue Reading →
Waa mxay Waswaaska qasabka ah? Maxaase lagu daweeyaa?
Waa maxay Waswaaska qasabka ah? Waswaasku waa fikrado cayiman oo ruuxu rumaysto taaso saamaynkarta dareenkiisa, hab dhaqankiisa iyo go’aanqaadashadiisaba, ayadoo ruuxu hadana ku qanacsanyahay in fikradahaasi yihiin kuwo llita. Waswaaska qasabka ah wuxuu ku dhacaa had iyo jeeraale dadka wanaagsan, ee wax qabadka leh. Tusaale ahaan: Ruux ayaa ku fakaraya in gacmihiisu aanay nadiif ahayn... Continue Reading →
Maxay yihiin kooxaha Quraaniyiintu?
Magaca Ilaahaybaan ku bilaabaynaa Allahaas oo naxariista naxarii guud iyo mid gaar ahba, waxa Mahaduna u sugnaatay Ilaahay (S.W.T), sidoo kale waxaan ku sallinaynaa oon Ilaahay u waydiinaynaa inuu Naxariis iyo Nabadgalyo korkiisa yeelo Xabiibka Muxamed isaga, ehelkiisii, saxaabadiisii iyo dhamaan muslimiinta raacday jidkiisii. Assalamacalaykum wa raxmatullahi wa barakaatuhu. Walaalayaal inta aad nooshahay marwalba waxaad... Continue Reading →
Mucjisada Birta Xadiida ee Quraanka.
Icjaaska Birta Xadiida ee Quraanka. Suurad ka mid ah suuradaha Quraanka magaceedu waa Suura Al-xadiid, waana suurada 57 aad ee Quraanka Kariimka. Waxaana la yaab leh in ay tahay suurada kaliya ee leh magaca cunsur macdaneed. Sidaan ognahay Quraanka macdano badan ayaa kusoo arooray sida Dahabka, Qalinka, Sbarjadka iwm. Balse Su’aashu waxa weeye Maxaa Suurad dhan oo... Continue Reading →